कोरोनाकै कारण बीरगञ्जमा पनि थप दुई जनाको ज्यान गएपछि… – PathivaraOnline
Home > समाचार > कोरोनाकै कारण बीरगञ्जमा पनि थप दुई जनाको ज्यान गएपछि…
admin September 1, 2020 समाचार, समाज, स्वास्थ्य	0
वीरगञ्ज । नेपालभरि महामारीकाे त्रास छाएकाे बेला वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमणबाट थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ । बाराको कोल्हबी नगरपालिकाका ६० वर्षीय पुरुष र पहिचान नखुलेको अन्दाजी ६० वर्षकै पुरुषको मृत्यु भएको हो । बाराका पुरुषको गण्डक कोभिड अस्पतालमा र ठेगाना नखुलेका अर्का व्यक्तिको नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता बरिष्ठ चर्मरोग विशेषज्ञ डाक्टर अतुलेश चौरसियाले जानकारी दिए ।
बाराका ६० वर्षीय पुरुष कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि भदौ १० गते नै अस्थायी कोभिड अस्पताल गण्डकमा भर्ना भएका थिए । उपचारकै क्रममा मंगलबार बिहान ४ः५० बजे उनको मृत्यु भएको चौरसियाको भनाइ छ । उनले भने, ‘शरीरमा अक्सिजनको मात्रा एकदमै कम भएकाले फूल अक्सिजनमा राखिएको थियो । अन्तमा रेक्सपाइरोटरी फेलियर भयो । बचाउन सकिएन ।’
पहिचान नखुलेका अर्का पुरुषको सोमबार बेलुका ८ः४५ मा मृत्यु भएको थियो । सामान्य ज्वरो र कमजोरीको समस्या रहेका उनको नारायणी अस्पतालको इर्मजेन्सी वार्डमा उपचार भइरहेको थियो । भदौ १३ गतेदेखि नै इर्मजेन्सीमा उपचाररत उनको मृत्युपछि जीन एक्पर्ट विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्दा नतिजा पोजेटिभ आएको थियो । घरवारविहीन र पहिचान समेत नखुलेका उनी सडकमै बेवारिसे अवस्थामा जीबन व्यतित गर्दै आएका थिए ।
यसअघि जेठ ३० गते वीरगञ्जको घण्टाघरमा भेटिएको बेवारिसे शवमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनको हालसम्म पहिचान खुल्न सकेको छैन । बाराका पुरुषको गण्डक कोभिड अस्पतालमा र ठेगाना नखुलेका अर्का व्यक्तिको नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भएको अस्प्ताल श्रोतले जनाएकाे छ ।
वीरगञ्जमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ५४ पुगेको छ । साउनयता मात्रै ५० जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएका ५४ जनामध्ये पर्साका ३९ जना, बाराका ११ जना र रौतहटका ४ जना छन् । पर्सामा मृत्यु भएका दुई जनाको ठेगाना खुलेको छैन ।
चितवनमा कोरोनाकै कारण एकैदिन तीन जनाको ज्यान गयो!
कोरोना संक्रमणकै कारण ७ जना सहित चार वर्षिया बालिकाकाे ज्यान गएपछि…
यस्तो देश हाे नेपाल! विद्यार्थीकाे खाजा पनि भ्रष्टाचारीले खाइदिए!
केशब भट्टराईका १५ वर्षिय छोराले लेखे यस्तो हृदय विदारक स्ट्याटसः ‘बुवा तपाईलाइ पर्खेर बसेको छु छिट्टै आउनु है’
बहराइनबाट आयो एक नेपाली कामदारको अत्यन्तै दुखद घटनाको खबर